Thiago Alcantara Oo Magacaabay LABADII Rukun Ee Liverpool Ee Mid Macallinka U Noqday, Midna Uu Fursadda U Waayey | Laacibnet.net
Thiago Alcantara Oo Magacaabay LABADII Rukun Ee Liverpool Ee Mid Macallinka U Noqday, Midna Uu Fursadda U Waayey
Thiago Alcantara ayaa shaaciyey inuu ka heli jiray waqtigii ay garoomada ku jireen, isagoo waliba si gaar ah u tilmaamay laacib isagoo garoomada ku jira macallin u ahaa.
Laacibka reer Spain oo Liverpool kusoo biiray xagaagii, ayaa waxa uu sheegay in halyeeyadii Liverpool ee Xabi Alonso iyo Steven Gerard ay u ahaayeen kuwo uu ka helo, laakiin Alonso oo ay waqti ku wada qaateen Bayern Munich ayuu si gaar ah u tilmaamay inuu wax badan ka caawiyey.
29 jirkan oo warbaahinta la hadlay ayaa xusay in Xabi Alonso uu u ahaa macallin iyo saaxiib dhow intaba, xilli uu ka jawaabayay su’aalo laga weydiinayay baraha bulshada.
“Waan kasoo garab ciyaaray Xabi Alonso. Waan calaamadaysanayaa anigoo leh waan lasoo ciyaaray. Waxaanu ahayn saaxiibbo isku koox ah, waxaanu ii ahaa macallin markii aanu u wada ciyaaraynay Bayern iyo xulka qaranka Spain.” Ayuu yidhi Thiago Alcantara.
Kubbad-sameeyahan oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray: “Waan jecelahay Alonso in badan, waxaanan u ixtiraamaa ciyaartoy ahaan, shaqsi ahaan iyo tababare ahaanba.”
Halyeygii khadka dhexe ee Steven Gerrard ayaa uu isagana ka hadlay, waxaanu yidhi: “In badan ayaan ixtiraamaa sheekooyinka Steven Gerard ee kooxdan. Sidoo kale, kooxda ayuu beddelay. Waxa aan rajaynayaa inaan la kulmi doono.
“Gerard waa halyey. Haddii aan ka garab ciyaari lahaa waxaan heli lahaa fursad aan wax badan oo kubadda cagta ah kaga barto.”
Thiago Alcantara oo Liverpool kula kowsaday dhaawacyo ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay garoomada oo uu ka maqnaa tan iyo badhtamihii bishii October iyadoo uu waliba waqtigaas laba kulan oo kaliya saftay.
Laacibkan ayay Liverpool rajaynaysaa inuu wax badan kusoo kordhiyo xili ciyaareedkan si ay u difaacan karaan horyaalka Premier League oo ay sannadkii hore ku guuleysteen, iyadoo waliba ay Manchester United saddex dhibcood ka sarrayso waqtigan.